Inagu saabsan - Radlux
Ku saabsan Radlux
Iftiinka Radlux waa soo-saare xirfad leh iyo alaab-qeybiyaha xallinta bannaanka, warshadaha iyo alaabta iftiinka macdanta.Warshadan ayaa ku fadhida dhul ka badan 10000 mitir oo laba jibbaaran, waxa ay leedahay aqoon iswaydaarsi casri ah iyo qalab casri ah oo wax soo saar iyo tijaabo ah.
Tan iyo 2004 radlux wuxuu bilaabay inuu ku lug yeesho nalalka qarsoon (laambad halide bir ah, nalka sodium cadaadis sare iyo nalka meerkuri), oo hadda waxaa lagu sifeeyay nalalka LED, oo ay ku jiraan iftiinka daadka, iftiinka baydhka sare, iftiinka biyaha aan biyaha lahayn, iftiinka tunnel-ka iyo iftiinka waddooyinka. .Dhammaan nalalka waxay ku qanacsan yihiin codsiga halbeegga caalamiga ah, sida ce, en, ie...iwm
Radlux waxay si buuxda u hirgelisay ISO9001: 2000 nidaamka xakamaynta tayada waxayna soo bandhigtay qalab tijaabo ah oo sare oo caalami ah.sidoo kale radlux waxay leedahay cilmi baaris xoogan iyo awood horumarineed si ay u buuxiso shuruudaha shakhsi ahaaneed ee macaamiisha.
Warshada ayaa ku fadhida dhul ka badan 10000 mitir oo laba jibbaaran
Tan iyo 2004tii radlux wuxuu bilaabay inuu ku lug yeesho laambadaha qarsoon (laambada halide birta, nalka sodium cadaadis sare iyo nalka meerkuri)
Radlux waxay si buuxda u hirgelisay ISO9001: 2000 nidaamka xakamaynta tayada
Waxaan ku qalabaysan nahay khad-soo-saarka casriga ah ee casriga ah iyo mashiinka dhejinta dusha sare ee loogu talagalay hogaanka iyo darawalka, oo lala kaashanayo mashiinka durista caaga ah iyo mashiinka dhinta ee guryaha nalalka, si aan alaabteena uga dhigno noocyo kala duwan oo tayo wanaagsan leh.
Shaybaarka shaybaadhka gudaha waxa uu xaqiijiyaa in nalalku leeyihiin wax qabad lumen oo wanaagsan, gabow wakhti dheer ayaa ka dhigaya hogaanka iyo darawalka si sax ah u shaqeeyaan, iyo muunad hubinta biyaha aan biyaha lahayn ayaa la sameeyaa si loo hubiyo in nalalka ay ku shaqeeyaan badbaadada dibadda.
HORUMARINTA & Nashqadaynta
Iyada oo ku saabsan waayo-aragnimada 15 sano ee iftiiminta, waxaan leenahay koox cilmi-baaris farsamo oo xoog badan, si aan ula xiriirno macaamiisha si ay u naqshadeeyaan nalalka oo ay ula kulmaan shuruudahooda shakhsi ahaaneed iyagoo isticmaalaya sawir cad, moodooyinka 3d iyo samaynta caaryada, tijaabinta iyo wax ka beddelka.
Si loo siiyo macaamiisha alaab tayo wanaagsan leh iyo adeeg wanaagsan waa yoolkeena joogtada ah.Si aan u gaarno, waxaan si adag u xakameynaa tallaabo kasta oo ka mid ah dhammaan wax soo saarka iyo gaarsiinta.
Caaryada la isku duro